/blog/Turinabol afka/Budada turinabol ee afka: Ma ogtahay xaqiiqda ku saabsan budada steroid?
Posted on 12 / 17 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray Turinabol afka. Waxay leedahay 1 Comment.
1.Waa maxay oral Turinabol? 2.Origal budada turinabol ah
3.Waa maxay budada turinabol ee afka? 4.Waa maxay caam ka ah budada turinabol ee afka?
5. Sidee u shaqeeyaa turinabol afka? 6.Benefits of turinabol afka loogu talagalay jirka dhismaha
7.Waa maxay faa'iidooyinka laga helo turinabol afka? 8.Turinabol afka ah iyo turinabol la isku duro oo ku jirta jirka
9.Oral turinabol iyo Maamulka 10.Recommend qiyaasta daawada turinabol
11. Qiyaasta daawada ee turinabol 12.Deegaanka Turinabol ee jirka dhismaha
13.Oral Turinabol Dumarka?
Fiidiyowga dufanka budada ah ee turinabol
Turinabol afka Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Dufanka turinabol ee afka
Qaaciddada Molecular: C22H50
Miisaanka kelli: 314.63200
Dhibcaha Biyaha: 125 - 127 ° C
Color: Cuntada cad cad
Maxay tahay Turinabol Oral?
Turbuun Turinabol(Chlorodehydromethyltestosterone, oo sidoo kale loo yaqaan 'Tbol' iyo Turinabol), ayaa iska leh taxaneoon taxane ah bodybuilding(caan isku mid ah baaritaanka maqaarka ), dhab ahaantii waa qaab beddelaad ah ee Dianabol (Methandrostenolone), taas oo dhab ahaantii ay tahay isku-dhafka qaababka kiimikada ee Dianabol iyo Goobjoog (4-chlorotestosterone). Sidaa darteed tani waa sababta magaca kiimikada dhabta ah waa 4-chlorodehydromethyltestosterone. Isbedelka qaab dhismeedka kiimikada ayaa u oggolaanaya in aan la sifeynin iyo sidoo kale inuu helo qiimeyn aad u hooseeya oo astaamo ah, taasoo macquul ah sababta Turinabol loo naqshadeeyey 'Dianabol fudud'.
Oral Turinabol (OT) wuxuu aad ugu eg yahay qaabka methandrostenolone. Kala duwanaanshaha kaliya, dhab ahaantii, waa dheellitirka atom chloride ee C-4. Oral-turinabol wuxuu leeyahay sumcad ah inuu yahay steroid aad u fiican. Isku daridda faleebo chloride waxay ka saari doontaa suurtogalnimada aromatisada iyadoo xannibaysa gelitaanka aromatase sidoo kale waxay yareeysaa beddelaadda DHT. Farqiga ugu weyni waxa weeye Axdiga Hore waxa laga yaabaa inuu leeyahay nolol dhimis dheer oo ka dhasha midabtakoorka hoose ee hooseeya iyo Oral Turinabol oo u muuqda in uu leeyahay qotodheer xagga SHBG marka loo eego methandrostenolone taas oo keeni karta testosterone iyo estrogen in la boodo.
Taariikhda budada turinabol ee afka
Oral Turinabol waxaa markii ugu horeysay sii daayay Jenapharm oo ka baxay Bariga Jarmalka sanadkii 1962. Steroid wuxuu ku raaxeysan doonaa qiimeyn aad u sarreysa oo nabadgelyo ah tobanaan sano maahan ragga oo keliya laakiin dumarka iyo xitaa carruurta oo ku jira goob daaweyn ah. Steroidkan anabolic (AS) ayaa lagu caddeeyey in uu yahay mid aad wax ku ool u leh dadaalka lagu dhisayo ama loo ilaalinayo cufnaanta caanaha iyo lafaha aan lahayn dhibaatooyin daran. Si kastaba ha ahaatee, Oral Turinabol wuxuu ka heli doonaa dareen caalami ah oo ku saabsan 1990 marka fadeexad barafka Jarmalka ah uu noqday aqoon guud.
Laga soo bilaabo 1974 ilaa 1989 waxa loo yaqaanay mashiinada Doping East German Doping waxay ku guuleysteen in ay udubdhexaadiyaan anopolic steroids ciyaartoydeeda Olympic. Ma aha oo kaliya inay khiyaameeyaan, laakiin waxay ka soo baxeen sidii steroids sida Oral Turinabol ahaayeen, waqtigaa, aan la garan karin. Qorshaha Qorshaha Dawlad-goboleedka ee 14.25 sida rasmiga ah loo ogaan lahaa ayaa sidoo kale isticmaali kara epitestosterone muddadaas si loo ogaado baaritaanka testosterone akhriska ee daroogada.
Marka laga helo Turunabol Oral oo ah qayb ka mid ah fadeexadda Jarmalka Jenapharm waxay joojin lahayd badeecada 1994. Labo sanno ka dib ayaa hay'adda dawooyinka ee ka soo baxday Jarmalka Schering, oo samaysay qalabka noocaas ah sida Primobolan, Testoviron iyo Proviron waxay heli lahaayeen Jenapharm, laakiin waxay doorteen inayan dib ugu soo celin Turunabol Oral. Laga soo bilaabo wakhtigaas steroid anabolic weligeed ah laguma soo saarin aaladda dhabta ah ee daawo-qaadashada dhabta ah waxayna noqotey suuq madow oo siyaado ah oo sambabada ah.
Waa maxay budada turinabol ee afka?
Caanaha turinabol ee ceeriin ah, walxo cayriin ah daawada turinabol, waa nooc cad oo budada ah, badeecooyin badan oo ananboloc ah oo bixiya alaab iibiyaha sida caadiga ah waxay iibsadaan nadiifin sare Daawo turinabol ceeriin ah, ka dibna u geli kaniinada turinabolka ah. Suuqa, daahirnimada Turinabol way ka duwan tahay, badanaa waxay ka koobantahay 60% -99% nadiif ah, qiimo kala duwan.
Faahfaahinta budada turinabol ee hoos ku qoran:
Magaca: Turinabol afka
Muuqaal: budada cad
Solubility: Insoluble ee biyo ama aalkolo, in lagu nadiifiyo Acetic acid, estyl ester
Dhibitaanka qalajinta: ≤0.5%
Birta culus: ≤10ppm
Waqtiga bilowga: 20 daqiiqo
Fasalka: Fasalka Daawada
Waa maxay waxa caadiga ka ah budada turinabol ee afka?
Suuqa, waxaa jira nooc kala duwan oo ah turinabol afka, sida kiniinnada oral turinabol, kiniinnada, iyo kondhka afka Turinabol. Dhammaantood waxay ka yimaadaan budada afka Turinabol. Waxaad si fudud u iibsan kartaa qaar ka mid ah kiniinada afka Orinabol dukaanka xaafadda, laga yaabee in yar ama iibso budada afka Turinabol online.That wuu fiicnaan doonaa.
Sidee buu u shaqeeyaa turinabol?
Oral Tembworks oo ah qaabka isbedelka ee Dianabol (Methandrostenolone); Isku dar ah Dianabol iyo Clostebol (4-chlorotestosterone) .Inkastoo qaabdhismeedka kiimikada guud uu la mid yahay Dianabol, waa hoormoon aad u yar. Tilku wuu daciifsan yahay kan Dianabol weli wuxuu bixiyaa faa'iidooyin kala duwan, iyada oo aan la helin saameynaha la xiriira steroids ee kordhaya ostogen. Tani waxay ka dhigan tahay inaad filan karto inaad si joogto ah u aragto, haddii uusan aheyn muruqyo aan fiicnayn, iyada oo aan la kulmin waxyeelleyn, biyo-qabasho ama ginecomastia.
On a functional sifaha sifaha ee Turunabol Oral waa mid aad u fudud. Sida ugu badan steroids anabolic waa in ay saameyn wanaagsan ku yeeshaan borotiinka kobcinta iyo xajinta nitrogen, iyo sidoo kale kordhinta tirada unugga dhiigga cas. Tilmaamahani waa mid muhiim ah marka ay kor u qaadaan jawiga anabolis ee shakhsiga. Cudurka Protein ee borotiinkaas ayaa ah kan ugu horreeya dhisidda xannibaad murqaha ah iyo "synthesis" oo ka dhigan qiyaasta unugyada unugyada abuura borotiinka, iyo xajinta nitrogen ee ka dhigaysa qayb muhiim ah oo ka kooban unugyada caanaha.
Dhibaatada yaraanta nitrogen waxay u horseedi doontaa dawlad-goboleed, halkaas oo ah xaddiga badan ee la hayo waxay kor u qaadi doontaa jawi anabolic oo wanaagsan. Kadibna waxaan leenahay unugyada dhiigga ee cas, kuwaas oo mas'uul ka ah qaadista oksijiinka iyo dhiigga. Unugyada dhiigga ee casaan waxay u siman yihiin oksijiinka dhiigga oo sii kordhaya, taas oo markaa u dhiganta adkeysiga murqaha. Dhammaan sifooyinkaasi waxay kaloo noqon doonaan kuwo aad u faa'iido leh marka la eego awoodda jirka ee dib u soo kabashada.
Faa'iidooyinka turinabol afka ee jirka jirka
Maxay tahay faa'iidooyinka turinabol ee dhirta jidhka? Bal aynu aragno.
Natiijooyinka aan lahayn miisaan culus (tani waxay faa'iido u tahay isboortiga aad isku dayeyso inaad miisaan u yeelato ama aad tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu tartanto)
Muruqyada adagtahay adigoon fiirin karin
Kordhinta qulqulka murqaha
Awood u leh inuu si adag ugu xiro SHBG
Kordhinta tijaabada baaritaanka bilaashka ah
Saameynada Hoos u Dhaca
Steroidkani wuxuu faa'iido u leeyahay ciyaartoyda iyada oo ay sababtay kordhinta muruqa caanaha ah, iyada oo aan jirin wax muhiim ah oo biyaha lagu hayo, ama aan kor u qaadin estrogen sidoo kale.
Inkasta oo faa'iidooyinka dhismaha muruqyada ee turinabolku ay ka yar yihiin stabdhabyada kale ee anabolic sida Dianabol, waxaad badanaa ka heli doontaa steroidkan loo adeegsado "jameeca" by bodybuilders.
Sababta tan waxay tahay in ay ka caawin karto kordhinta lacag la'aan (firfircoon) testosterone Heerarka ay uga mahadcelineyso waxay ku shaqeyneysaa hoormoonka jinsiga ee globulin (SHBG). Tani waxay gacan ka geysaneysaa kor u qaadida faa'iidooyinka kale ee steroids kale.
Maxay tahay faa'iidooyinka turinabol ee afka?
Sababtoo ah kala-soocida afka ee turinabol ee kala-soocideeda iyo saameynteeda anabolic, waa steroid daciif ah oo daciif ah marka loo eego hoormoonka waalidkiis Dianabol. Si kastaba ha noqotee, dammaanad qaadka Tbol ayaa ah in wax kasta oo u muuqda awood dhisida muruqyada, waxay soo bandhigi doontaa wax badan oo ka yar habka saameynta androgenic iyo gabi ahaanba wax saameyn ah estrogenic (sababtoo ah awood la'aanta inay aromatize ku sameyso Estrogen). Sababtoo ah xoogaa awood ahaan ka daciifsan Dianabol, qiyaasaha loo baahan yahay in laga soo qaado saamaynta Tbol waxaa loo tixgeliyaa inay aad u sarreeyaan (tan ayaa lagu sharxi doonaa wax yar ka dib qaybta qiyaasta ee Tbol ee muuqaalkan).
Guud ahaan, cayaartoyda iyo jir-dhiseyaashu waxay filan karaan guulo aan fiicnayn oo aan fiicneyn oo aan halis u aheyn waxyeelleyn, gino, ama waxyeelo kale oo loo yaqaan 'estrogenic'. Awoodda xoogga iyo xoogga lama ogaado in ay tahay mid aad u kacsan sababtoo ah la'aanta awoodda anabolic, laakiin guulaha dusha sare iyo tayada leh ee si joogta ah u koraya ayaa la filayaa. Waxa kale oo loo isticmaalaa sida wakiilka jarjaran ee mudada gaaban inta lagu jiro wakhtiyada luminta dufanka ama diyaargarowga kahor-tartanka sababtoo ah iyada oo aan la awoodin in lagu beddelo Estrogen. Awoodaha turinabol ee afka laga qaato waxay si dhab ah u iftiimaan sidii loogu talagalay steroids kale marka ay la socoto (lagu xakameeyey) steroids kale oo ay sabab u tahay awooddeeda ku xirnayd inay ku xirto SHBG. Xayiraadda ShBG waxay u oggolaaneysaa in badan oo ka mid ah steroids kale oo lagu xakameyn karo si ay u noqoto shaqadooda, iyada oo aan laysku halleyn karin SHBG, taas oo ah faa'iido kale oo ay soo bandhigto.
Turinabol afka ah iyo turinabol la isku duro oo ku jirta jirka
Farqiga u dhexeeya turinabol ee afka iyo cirbada ayaa la mid ah inta badan steroids kale. Afku waa sahlan yahay in la qaato laakiin aragtida waxaa laga yaabaa in uu waxyeelo u geysan karo beerka, sidaas awgeedna waxay ku sii adkeyn kartaa qiyaasta sare ee daawada la isku mudo. Intaas waxaa sii dheer, duritaanku waa wax yar oo la ogaado. Laakiin, guud ahaan, tani waa arrin shakhsi ahaaneed.
In bodybuilding Turinabol waxaa lagu magacaabi karaa dukuminti. Maaha wax la yaab leh - markii hore "boqorka farshaxanka" ee Bariga Yurub ayaa loo isticmaali jiray methandrostenolone raqiis ah (dianabol). Dhammaan turinabol ka soo jiidatay Jarmalka Jarmalka waxaa qabsaday macalimiin fudud oo fudud. Western Europe iyo USA xitaa ma aysan ogeyn in wax soo saarka noocaas ahi jiro, ugu yaraan wax jir-dhisayaal ah ayaa sheegay inay waligood isticmaaleen. Xaaladda ayaa isbeddeshay maahan waqti dheer kahor markii daroogadaas aad u faa'iido badan la siiyey fursad labaad waxayna ku guulaysatay guushii suuqyada Maraykanka iyo gaabneed ka dib dhammaan dalalka kale.
Waa maxay sababaha guusha? Turinabol ee ugu horeysay ayaa kor u kaca awoodda. Marka labaad, sida la sheegay, turinabol afka ayaa si dhakhso ah uga baxa jidhka oo aan laga helin kaadida 6-8 maalmood kadib dhammaadka isticmaalka. Kama aanan maqlin baadhitaano wax ku ool ah oo loogu talagalay turinabol. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa in sababtoo ah baaritaanada noocaan ah aan si fudud loo samaynin maalmahan.
Muuqaal wanaagsan oo daawo ah ayaa loo tixgelin karaa iyada oo la siinayo muruqyada muruqyada iyada oo aan wax uruurin biyo ah. Waayo-aragnimadu waxay muujinaysaa in isticmaalka turinabol uu ku dhow yahay qasbiyada diyaarinta tartanka. Sidoo kale waxay kobcinaysaa hawsha ilaalinta maskaxda ee ka hortagga burburinta wareegyada wareegista.
Waxaa jira muuqaal kale oo ah turinabol - waa 'daroogada jinsiga». Isticmaalida steroid si cadaadis ah ayey u kordhineysaa libido ragga, mararka qaarkoodna, sidaas darteed rabitaanka jinsiga ayaa ka adkaata rabitaanka tababarka Tani hantida, iyo sidoo kale awoodda wax yar ka hortagtaa soo saarida testosterone endogenous, waxay ka dhigtaa daroogo waxtar leh si loo qaato qiyaaso dhexdhexaad ah inta u dhaxaysa wareegyada "AAS" oo ah "culus" AAS si ay u sii wadaan jinsiga gawaarida.
Qeybaha iyo Maamulka Maamulka Turinabol
Turinabol afka ayaa leh qiyaas hoose oo hooseeya oo 6 iyo qiimeynta awoodda anaboleed ee 53, tani waxay u dhowdahay inay ku dhawaato marka loo eego isbarbardhigga saameynaha iyo guulaha. Sababtoo ah sida darajo hooseeya oo ka hooseeya midabtakoorka, finanka, gardarrada, niyad jabka iyo xoogga korodhka ayaa dhif ah, laakiin maaha mid aan jirin. Marka la barbardhigo hormoonka waalidiinta Dianabol, waa anabolic oo daciif ah oo jirka ah ma aragto oral Tawl sida wakiilka iibsashada mass.
Talo soo jeedin ah ee turinabol afka
Turinabol afka ayaa leh qiyaas ahaan kala badh qiimeynta anabolis ee testosterone, sidaa daraadeed waxay caadi ahaan kugula talineysaa qiyaasta daawada "turinabol" ee afka laga qaato ee xNUMX-20mg maalintii. Turinabolososku wuxuu ka badan karaa 40-40mg maalin kasta, laakiin jidh-dhisayaasha waxay soo sheegaan waxyeelooyinka soo kordhaya, halka guul-darradu sii socoto.
Qiyaasta daaweynta ee turinabol afka ah
Qiyaasaha daaweynta ee turinabol afka waa qiyaastii 5-10mg maalin kasta waxaana la siiyaa kuwa qaba cudurada murqaha. Qiyaasaha daaweynta haweenku waxay bilaabmaysaa maalinta 1mg maalintii oo waxay ka badan kartaa 2.5mg maalin kasta (QC).
Qiyaasta daawada turinabol ee jirka loogu talagalay jirka
Daawo qadarin ah oo ku salaysan turinabol waxaa lagu soo jeediyaa xNUMX-20mg maalintii.
Isticmaalayaasha dhexe waxay isticmaali karaan 40-60mg maalin kasta.
Jirada iyo horumarka jirka ee xirfadlayaasha ah waxay isticmaali karaan 80mg maalin kasta, waad ka fiicnaan laheyd wax ka badan 80mg / maalin, Hase yeeshee, kuwan qiyaasta ah ee dheeraadka ah waxay sababi karaan waxyeelo daran waxaana loo isticmaali karaa korriin fiican.
Oral Turinabol Dumarka?
Ciyaartoyda Gabdhaha Bariga Jarmalka waxay qaateen OT 5-15 mg maalintii maalintii laba ilaa lix toddobaad markiiba. Marka laga soo tago ficil-celinta cad, qaar badan oo ka mid ah ciyaartoydan dumarka ah ayaa sidoo kale la kulmay cudur beerka ah, wadne xanuun, dhalmo la'aan, arrimaha maskaxda, iyo xitaa dhimasho. Oral Turinabol waxaa lagu caddeeyay inuusan aheyn steroid anabolic oo ammaan ah haweenka. Ma dhahayo cawaaqibyadan ayaa ah kuwo lama huraan ah, laakiin waxay tahay xaqiiqo la xaqiijiyay in heerka dhacdooyinka cawaaqibyadan oo kale ay aad u badan yihiin. Markaa dhab ahaan kuma talinayno dumarka inay qaataan daawadan.
Turinabol Cycles and Uses (tixraaca kaliya)
Wareegga afka Turinabol
Tbol waxaa badanaa la isku daraa steroids kale, taasina waxay sabab u tahay in uu yahay maaddo fudud oo hoos u dhigta heerarka testosterone dabiiciga ah ee dadka isticmaala. Turinabol ma aha anabolic ama orrogenic ee steroids, sidaa daraadeed wakiilada mass xayeysiinta ayaa loo jecel yahay Tval. Anabolic-ka fudud ayaa loo isticmaalaa inta lagu jiro goynta wejiga, mudooyinka dufanka iyo jir-dhiska ka hortagga jirka.
Xilliyada Turinabol waxay ka koobnaan kartaa adigoo kaligaa ka shaqeynaya 40-60mg maalintiiba maalmaha 6-8. Tani waxay ku siin doontaa korriin fiican oo xoog leh, murqaha caatada ah iyo u ogolow qofka isticmaala steroid inuu ilaaliyo muruqa marka uu ku jiro kaloori la'aan. Ka-hortagga burburinta borotiinka waa qalab aad u baahi badan marka la geynayo 10% dufanka jirka waa yoolka.
Diidmada wareegga Turinabol
Cunto dheeraad ah oo ka soo baxday Turunabol ayaa macnaheedu noqon karaa xeryaha kale sida; Testosterone waxaa loo isticmaali karaa waxyeelooyin isku dhafan. Diyaargarow tijaabo ah oo gaaban iyo waqti dheer ah ayaa loo isticmaali karaa. Testosterone Propionate ee 100mg ayaa maalin kasta la isku duro Turinabol 60mg maalmaha 8 ee xannibaya XNUMX waa meel fiican oo loogu talagalay xajmiga muruqa ee caanaha iyo xayiraadda xagaaga.
Waa in la ogaadaa in aysan suurtagal ahayn in la go'aamiyo qiyaasta ugu fiican ee aan la haynin wax macluumaad ah oo ku saabsan calaamadaha muuqaalka jirka ee cayaaraha fudud, waayo-aragnimadiisa uu u leeyahay isticmaalka anabolic and andtrogen steroids, himiladiisa ugu dambeysa iyo waxyaabo kale.
Isticmaalka turinabol afka ah
Waxay u fiicantahay cayaarta cayaaraha, kor u qaadayaasha ama jismi-yaqaanada si ay u gooyaan. Hase yeeshee, haddii ay daruuri u baahan tahay dufan, ma caawin doonto sababtoo ah waa steroid, oo aan ahayn cad cad oo gubanaysa.
1) Turanabol 35 mg / ED saddex todobaad dhammaadka wareegga deca-dianabol-testosterone si looga dhigo gargaar
2) Turanabol 50 mg / ED for 6 isbuuc Parabolan (200 mg / w) iyo / ama Stanozolol (150 mg / w) dhamaadka wareegga toddobaadyo 2-3 (suurto gal ah tan iyo bilowgii of wareegga)
3) wareegga isbeddelka Turanabol 50 mg / ED toddobaadyada 6. Caqabado badan / tartan tartan ka hor.
4) Inta lagu jiro diyaarinta cirbadaha turinabol waxaa badanaa lagu daraa trenbolone, oxandrolone ama stanozolol. Natiijooyin aad u wanaagsan ayaa la helaa iyada oo la isu geeyo tijaabinta testosterone.
5) Isku-darka turinabool + cirridrolonone waa mid aad u daciif ah, waxaa lagu talin karaa oo kaliya dumarka.
6) Waxa aad isticmaali kartaa turinabol afka laga qaato oo la isku mudo inta lagu jiro wareegga ballaaran ee isku dhafan ee kala duwan, tusaale ahaan testosterone, nandrolone ama isku dhafka, halkii methandrostenolone (dianabol). Waxaa lagu talinayaa kuwa cayaaraha jecel in ay helaan muruqyo tayo leh.
PCT waxaa loo baahan yahay ka dib koorasyada intooda badan.
Afka turinabol afka nuska
Nolosha nuska ah ee turinabol ee afka suugaanta sayniska ka dib markii maamulka IV waa saacadaha 16; Si kastaba ha noqotee, turinabol afku waa mid aan la mid ahayn. Guud ahaan nolosha nuska ah ee maamulka afka waa ka dheer yahay maamulka IV, si kastaba ha ahaatee, kiiskan waxaa laga yaabaa in uu gaaban yahay sababtoo ah dheef-shiid kiimikaadka hore iyo hoos u dhaca heerka maskaxda oo la yareeyey marka loo eego qiyaasta IV. Warqad kale waxay soo jeedineysaa nolol caadi ah oo gaaban. Qiyaasta wanaagsani waa ugu yaraan siddeed saacadood oo loogu talagalay badhkii nolosha steroidkan oo leh qiimaha saxda ah ee u dhaxeeya saacadaha 12 iyo 20. Xaqiiqda ah in metabolitikada steroid this muddo dheer la ogaan karo ka dib markii joojinta ku doodaya nolosha sii dheer.
Saameynnada daaweynta ee turinabol afka
Turinabol waxaa loo yaqaana mid ka mid ah kuwa ugu fudud steroids anabolic, waxaa inta badan lagu meeleeyaa isla qaybtaas oo kale Anavar iyo Primobolan.Taas oo ku saabsan steroidskaan ma saameyn doonto heerarka estrogen, sidaas darteed waa mid ka mid ah steroids ugu ammaan ah ee haweenka u isticmaalaan.
Inkastoo ka badbaado steroids badan, iyadoo la isticmaalayo turinabol afka ah maahan khatar la'aan. Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee turinabol ee afka laga yaabo inaad la kulanto:
Diidmada waxsoosaarka testosterone dabiiciga ah
Kordhay LDL (xun) kolestarool
Hoosudhaca HDL (wanaagsan) kolestaroolka
Xaaladaha maqnaashaha / Tirada hoose ee shahwada
Walaaca sii kordhaya ee beerka
Timaha suurogalka ah
Kordhay timaha jirka
Sababtoo ah steroid waxay leedahay suurtagalnimada in ay keento saameynaha aan macnaheedu ahayn inaadan la kulmi doonin. Dhamaanteenna waxaan kuula dhaqannaa daawooyinka iyo daawooyinka si kala duwan.
Xakameynta tijaabada dabiiciga ah
Isticmaalida isticmaalka nukliyeerka, waxay isticmaali karaan jidhkaaga oo soo saaraya testosterone yar. Mararka qaarkood heerarkaagu wuxuu ku noqonayaa mid caadi ah marka wareegga steroid uu dhammaado, laakiin tani had iyo jeer ma aha kiiska.
Testosterone Low wuxuu keeni karaa arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay kordhinta dufanka jirka iyo tiro yar oo muruq ah. Waxaad sidoo kale la kulmi kartaa arrimaha galmada sidoo kale, sida libido hoose iyo wax soo saarka hooseeya.
Saameyn ku yeelanshada Cholesterol
Isticmaalka turinabol afka laga qaato wuxuu keeni karaa kor u kaca kolesteroolka LDL iyo kolestaroolka HDL ee hooseeya. Tani waxay kordhin kartaa qadarka xididdada ku jirta xididdada, taas oo horseedi karta dhibaatooyin sida wadne qabadka iyo istaroogga.
Haddii aad halis u tahay heerarka sare ee kolesteroolka ka dib markaad isticmaasho steroid anabolic waxaa lagugula talinayaa.
Waxaad yareyn kartaa halista adiga oo isticmaalaya talaabooyinka soo socda:
Cunitaanka kalluunka dufanka badan (omega-3 acids fatty)
Kordhinta saliidda kalluunka
Xaddid inaad qaadato dufanka buuxa
Iska yaree qaadashada sonkorta
HA SALINTARINTA steroids kale
Kordhinta Khatarta Waxyeellada Beerka
Cudurrada anabolisida badani waa hepatotoksik, iyo turinabol afka waa nooc ka duwan. Isticmaalka wuxuu kordhin karaa xaddiga diiqada ee beerkaaga. Tani macnaheedu maaha inaad dhib u geysaneyso beerkaaga iyada oo loo marayo isticmaalka, laakiin haddii aadan haysanin beer caafimaad leh si uu u bilaabo markaa steroidska ayaa si fiican looga fogaadaa. Sidoo kale waxaa lagula talinayaa in laga fogaado adoo isticmaalaya xadiga xad-dhaafka ah ee khamriga, iyo in la hubiyo in wareegyadaada aysan ka badneyn waqtigii lagu taliyey.
Iibsiga budada turinabol
halka laga gadanayo si aad u iibsato budada afka Turinabol?Runtii waa baaris wanaagsan oo laga fekero.Haddii aad go'aansato inaad iibsato budada Turinabol ee afka laga qaato, waxaad galeysaa suuq tayo ahaan ka duwan. Waxaad toos uga iibsan kartaa alaabada farmashiyaha maxalliga ah, waxaana lagu dalban karaa afka Turinabol ee afka laga qaato, nooca sheybaarka dhulka hoostiisa ah ayaa la heli karaa, marka la barbardhigo dukaanka shirkadda, budada afka laga iibsado ee Turinabol ee afka laga iibsado ayaa ka dhaqso badan oo ku habboon, xulashadu way ka sii xoog badan tahay, laakiin ujeedadu waa adiga waxaad haysataa shirkad-wadaag wax-soo-saarka muddada-dheer la isku halleyn karo, haddii aad horey u haysatay alaab-qeybiye lagu kalsoon yahay, marka waan kugu hambalyeynayaa, haddii kale, AAS ayaa laga yaabaa inuu yahay xulashadaada wanaagsan.
Sida loo sameeyo levitra waxtar badan Haweeney Viagra Waxkasta oo ku saabsan jimicsiga xoojinta jilicsanaha jilicsan